Dargaggeessi lammii Jarmaan ganna 16 abbaa miila guddaa riikardi haaraa qabate – Fana Broadcasting Corporate
Dargaggeessi lammii Jarmaan ganna 16 abbaa miila guddaa riikardi haaraa qabate
Finfinnee, Hagayya 29,2011 (FBC) – Dargaggeessi lammii Jarmaan ganna 16 Laars Mootzaa abbaa miila guddaa jedhuun maqaan isaa riikardii haaraa addunyaa fi galmee dinqisiisoo irratti galmaa’u danda’eera.
Lammii Jarmaan Laars Mootzaa dheerinni miila isaa bitaa seentimeetira 35.5 yoo ta’u, kan mirgaa ammo seentimeetira 38.98 kan himame.
Kanumaan walqabatee kopheen inni hidhatu lakkoofsa 57 akka ta’e kan himamu.
Laars riikardii haaraa kana kan fudhate namicha Maatuu Andiirew Buujuu yoo ta’u, Maatuun yeroo sanitti Miilli isaa bitaa Seentimeetira 32.95 miilli isaa mirgaa ammo Seentimeetira 32.85 dheerachuun riikardii haaraa kan qabate.
Abbaan Laars Fraank akka himanitti miilli Laars dheera akka ta’e duraanuu shakkeen ture, sababni isa ammo yeroodhuma dhalatuyyuu miilli isaa seentimeetira 9.5 dheerata ture jedhan.
Akkuma maatiitti miilli isaanii dheera akka ta’e kan himaan abbaan Laars, kophee lakkoofsa 50 akka hidhatanii fi kan haadha Laars ammoo lakkoofsa 43 akka ta’e ibsaniiru.
Laarsiif qormaanni guddaan miila isaaf kophee barbaade argachuu akka ta’e kan himamu.